Kalluunka Karbaashka: astaamaha iyo noocyada kala duwan | Kalluunka
Carlos Garrido | | Aquarium-ka biyaha qabow, Aquarium biyo qabow
Marka ay timaado xiisaha loo qabo helitaanka noocyo kalluun ah oo kala duwan oo lagu daro aquarium-keena, noocyo fara badan oo fara badan ayaa naga horreeya, kuwaas oo cabbirkooda, midabyadooda, iwm. Si kastaba ha noqotee, kala duwanaanshahan hodanka ah, waxaa jira hal kalluun oo ka sarreeya inta kale sababo la xiriira astaamo ka dhigtay mid caan ah. Waxaan ka hadleynaa teendhooyinka, mid ka mid ah kalluunka biyaha qabow badanaaba
1 Sifooyinka kalluunka
2 Kalluunka Kois
3 Sidee loo daryeelaa Koiskeena ama Kaaribkeena?
4 Noocyo iyo noocyo ka mid ah kalluunka Carp
Kaaribka guud (Cyprinus carpio) wuxuu ka soo jeedaa qaaradaha Yurub iyo Aasiya. Waa mid ka mid ah kalluunka biyaha macaan adkaysi badan oo sifiican ula qabsaday meesha aad ku nooshahayTani waa sababta ay ugu guuleysatay inay ku guuleysato ficil kasta oo meeraha ah waxayna kasbatay "mudnaanta" gelitaanka liiska 100 noocyada shisheeyaha ah ee ugu waxyeellada badan adduunka marka loo eego Ururka Caalamiga ah ee Ilaalinta Dabeecadda.
Badanaa, tijaabooyinka dadka waaweyn waxay gaarayaan dherer ku kala duwan kan 60 iyo 90 sintimitir, iyo miisaan ku wareegsan 9 kilo.
Waad ogtahay intee ayuu kalluun noolaa teendho weyn? Waxaa lagu qiyaasaa in tijaabooyinka qaarkood, haddii ay ku raaxaystaan ​​xaalado gaar ah inta ay nool yihiin, ay gaari karaan 1.2 mitir oo culeyskiisu yahay 40 kg, ayna ka weynaan karaan 60 sano jir, ku dhowaad waxba! Waxay sidoo kale ku noolaan lahaayeen biyaha fadhiya iyo wax yar oo naxaas ah illaa iyo inta kuwani ay ku jiraan heerkulka u dhexeeya 17 iyo 24 ºC.
Waxay yihiin badanaa wax ku ool ah, iyo cunnadeedu waxay ka kooban yihiin dhirta biyaha ku jira, cayayaanka, qolofta yaryar, iwm. Xilliga taranka wuxuu bilaabmaa guga, wuxuuna ku dhacaa biyo mool dheer, cufan.
Dumarku waa inay jiifsadaan Ukunta 300.000 taas oo ku xidhan heerkulka biyaha dillaaci kara 3-4 maalmood ka dib.
Ragga iyo dumarka labaduba waxay gaaraan bislaanshaha galmada markay jiraan da'da 4 sano. In kasta oo, priori, aysan lahayn midabyo aad u muuqda, Shiinaha iyo, si gaar ah Japan, waxay ku maareeyeen taranka maxaabiista si ay u dhaliyaan noocyo cusub ama nooc midabyo dhalaalaya oo muuqaal leh, cabir ahaan ka yar, loona yaqaan Koi.
Koi, si ka duwan noocyada kale ee walaalaha ah ee guushoodu ka soo gaadhay qaybta ugaadhsiga iyo kalluumaysiga, waxay caan ku noqdeen sida xayawaanka la haysto. Doi ahaan, Koi oo Jabaaniis ah macnaheedu waa "jacayl" ama "kalgacal", taranka xayawaanadan ayaa si weyn u koray bilawgii qarnigii XNUMXaad, markii balliyada Jabaan ee koi ee ay ku taallay kaartoonka midabada leh ee quruxda badani ay aad u caan baxeen. . Si aad u badan, in balliyadan ay ku faafaan dalal kala duwan oo ka baxsan dhulka Aasiya, iyo xitaa tirada breed brep xirfadle.
Sidee loo daryeelaa Koiskeena ama Kaaribkeena?
Sida kor ku xusan, Koisku wuxuu noqday kalluunka gudaha heer sare. Si aad u badan, in ay tahay tan ugu badan ee lagula taliyo dhammaan kuwa ka bilaabaya hiwaayaddan cajiibka ah ee doonaya inay isku dayaan nooc u baahan daryeel yar, ayaa ku dhufanaya muuqaal ahaan iyo midab ahaanba, taasina waa dammaanad qaadka guusha aquariumyadooda iyo balliyada.
Kalluunka Karp ama Kois waxay leeyihiin doorbid qaybaha dhexe ama hoose meesha ay joogaan, had iyo jeer kor u kaca dusha sare si ay wax u cunaan. Waxay ku noolaan karaan kooxo yar, iyadoo wadar ahaan 6-7 shaqsi. Dabcan, waa in la ogaadaa in mararka qaarkood ay muujin karaan dabeecad rabshad leh, gaar ahaan noocyada yaryar. Xaaladdan waxaa lagu xoojiyey aquariums-yada yaryar iyo kuwa dadku ku badan yihiin, taas oo ay fududahay in la ilaaliyo sida kalluunkan dhibaatooyin dagaal. Sidaa darteed, laguma talin karo inaad ku xajisato haamaha kalluunka yaryar, sida kuwa wareega wareega, ama aquarium-yada ay ku wada nool yihiin tiro badan oo tijaabo ah. Tani waxay sidoo kale horumarkaaga ka dhigi doontaa sida ugu wanaagsan ee ay noqon karto. Meel bannaan ayaa muhiim u ah kalluunkan, sidaas darteedna waxaa lagula talinayaa aquariums-ka u dhiganta ama ka weyn 90 litir oo biyo ah.
Heerkulka biyuhu waa inuusan noqon dhibaato weyn, maadaama aan horey u ogaanay in xayawaankani ay si wanaagsan ula qabsadaan xaaladaha cimilada. In kastoo, la siiyay doorashada, teendhooyinkan yaryar waxay si fiican ugu dulqaadan karaan qabowga, illaa iyo inta ay dhexdhexaad tahay, marka loo eego kuleylka, maaddaama heerkulka sarreeya uu u horseedi karo yaraanta oksijiinta ee biyaha taas oo, si macquul ah, u noqonaysa mid u dhinta kiraystayaasha. Waxa jiray kiisas balliyo ay xayawaanadan yaryari u adkaysteen xitaa dhaxan.
Sera - Midabka Koi Dabeecadda,...
Sera - Cunto Dhamaystiran ...
Dhanka cuntada, mar hore ayaa la sheegay inay yihiin kuwa wax walba cuna (u dhow kuwa hilibka cuna), ee ha waalan. Iyadoo leh quudinta qaab-qaabeeya oo aan ka helno goob kasta ku takhasusay xoolaha, waa ku filan tahay. Laakiin haddii aan rabno inay ku raaxaystaan ​​cunto hodan ah oo kala duwan, waxaan siin karnaa xoogaa cuntada noolow sida dirxiga yaryar ee cayayaanka oo loo isticmaalo kalluumeysiga. Intaa waxaa dheer, qaar ka mid ah khudaarta nafaqada ahi weligood wax ma yeelaan, xitaa bixinta khudaarta dabiiciga ah, taas oo aan ku eegayno sida ay iyagu iyagu u qaataan qaniinyada yaryar. Waa inaad ogaataa in xilliga qaboobaha, Kois iyo rooga yar ay galaan geedi socod caajis, taas oo waxqabadkeedu si aad ah u yaraaday, taas oo muujinaysa hoos u dhac ku yimaad dheef-shiid kiimikaad iyo, sidaa awgeed, rabitaanka cuntada ee xayawaanka. Haddii aan u kuur-galno marka quudinta isaga, uusan cunin cuntada ama uusan ku sameynin tiro aad u yar, laguma talinayo in lagu adkeysto, in yar oo walwal laga qabo, maadaama xad-dhaafka badan uu sababi karo cawaaqib xumo.
Sera Fil Filter firfircoon ...
Arrin kale oo aad muhiim u ah ayaa ah shaandhada biyaha. Shaandheynta ku jirta quraaradda quraaraddayada ama ballikeenna waa in loo sameeyaa qaab dibedda. Haddii kalluunkeenu ku jiro hawo -biyood yar oo aan lahayn shaandho, waa inaan sameynnaa is -beddello biyo ah oo soo noqnoqda, maaddaama noocani uu soo saaro qashin aad u badan oo si weyn u qiimeeya tayada oksijiinta biyaha ku kaydsan. Waxaan kugula talineynaa inaad ku khamaarto shaandheyn dibadeed sida kuwan oo kale.
Noocyo iyo noocyo ka mid ah kalluunka Carp
Suuqa dhexdiisa waxaa nalasiiyaa noocyo badan oo kalluunka noocyada kalluunka ah oo loogu talagalay aquarium-keena. In kasta oo ay isku nooc yihiin, haddana way badan yihiin noocyada kalluunka Teendhada taas oo midabada iyo qaababku ay aad u kala duwan yihiin. Loo yaqaan sida "Comet American" Waa noocyada ugu baahsan maxaa yeelay waxay u baahan tahay daryeel yar. Baallahoodu ma aha sida kuwo dhaadheer oo jidhkoodu waa khafiifsan yahay. Isaga ayaa ku xiga "Ryukin" o "Dabada xijaabka", oo leh baalal aad u dhaadheer iyo jir buurbuuran. Aad ugu eg kan dambe waa "tukashada" iyo Madaxa Libaaxa, inkasta oo noocyadaani ay wataan cufan cephalic papillae ah. Saddexdaas, sidaan nidhaahno, waa kuwa ugu baahsan, laakiin kuwa kale oo badan oo qurux weyn leh ayaa lagu dari karaa iyaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Kalluunka » Aquarium-ka biyaha qabow » Aquarium biyo qabow » Kaarbooti
Waxaan hayaa laba teendho sida oranjiga sawirka hore, kaliya maahan oranji, waa lacag, dhibaatadu waxay tahay in midkood uu casaan noqonayo mana garanayo sababta, haddii ay tahay cudur ama cunto, teendhada kale waa isku midab qalin
Jawaab Liz Sifuentes
Waa salaaman tahay Liz.
Mabda 'ahaan, noocyadani waa carp, ma ahan carp, wax badan ayey wadaagaan, laakiin aad ayey uga duwan yihiin midba midka kale. Tusaale ahaan, u fiirso in karbaashku leeyahay wax dhib ah oo aan midab lahayn,. Dhinaca kale, kiliyaha haa oo iyaguna waa noocyo midabbo kala duwan leh oo xataa waxay leeyihiin laba dabo, waxay caan ku yihiin Shiinaha. runtiina waxaa loo sara kiciyaa cunista dadka.
Kaarbaygu sidoo kale, laakiin wuu ka duwan yahay ... si kastaba ha noqotee waxaan isku dayi doonaa inaan ka jawaabo su'aashaada.
Waa inaad maskaxda ku haysaa in dhammaan kalluunka la haysto ay u baahan yihiin inay oksijiin ku filan ku helaan biyaha, waxaa lagama maarmaan ah inaad isku daydo inaad oksijiin ku sameyso biyaha iyadoo la adeegsanayo qalab koronto (aalado).
Mararka qaarkood waxay kaloo noqon kartaa cuntada aan dhameystirneyn.
Biyaha tuubada way xunyihiin lime-kooda iyo koloriin darrada awgeed.
Soo jeedin: balliga beddel iskuna day inaad cuntada bedesho, sidoo kale waxaan kugula talinayaa inaad la tashato takhasusle oo aanad la tashan qof kasta oo dhaha waan garanayaa
KAFTANKA CAADIGA AH WUU KA MID YAHAY XOOLAHA SOO DHAWEYNTA DAD DADKA FURSADU U LEEYIHIIN IN AY KU ARKAAN CAD BADAN. WAAN KA QAYB GALAY IN AY TAHAY XOOLAHA SOO GAADHAY OO LAGU SAMEEYAY QIIMO AAD KU DARAN IN LA AAMINO
Waad salaaman tahay, waxaan ahay biyo-biyood cinwaankeedu yahay, waxaan kuu sheegayaa in golfhis ama kalluun dahaba, ha ahaadeen dabada jilicsan ama dabada la faafiyay, waa iskutallaabooyin hidde ah. Waad iibsan kartaa muunad leh astaamo iyo midab gaar ah, si aad wax uga beddesho waqti ka dib waxay u beddeli kartaa qaabkeeda iyo midabkeeda sidoo kale tan iyo markii midabka ay ka heleen waalidkiis iyo awoowayaashiisa iyaga. Waxay la mid tahay tukashada salaadda inay jirto xoogaa metamorphosis ah taasoo ka dhigaysa inay aad u weynaato oo caqabad ku noqon karto aragtida Xaaladdan oo kale, faragelinta qalliinka waa in la sameeyaa oo laga saaraa wixii dheeri ah. Waxaan sameeyay waxyar dabcan intii aan ku guda jiray suuxdinta waxaana lagu sameeyaa miis ka baxsan biyaha iyadoo loo marayo taxaddarro habboon. Dhamaantood waxaan ku guuleystey gebi ahaanba. Waxaan sidoo kale heli karaa cyst qayb ka mid ah jirka oo aad u jilicsan si looga saaro khataro badan. Waxaan rajeynayaa in dib u eegidani ay kuu adeegi doonto. Waxaan ka imid Uruguay, wixii su'aalo ah ee ku saabsan adeeggaaga. Salaan Annette
Ku jawaab Annette Alvarez
Liz, ha iloobin in heerkulka biyuhu yahay inuu hooseeyo oo balligu ka weynaado oo uu la socdo qaybo u dhigma noloshiisa dheer.
Waxaan u duulaa kalluunka cyprinids, waxaa jira noocyo badan oo carp iyo barbel ah, nolol caadi ah oo aan lagu cayilin kalluunka kalluunka lagu kariyo wuxuu gaari karaa 30Kg. Way jiraan 47 laakiin durba way cayilan yihiin (sababtoo ah boiliska) Wejiga waxaad ku arki kartaa sawiradayda noocyada waaweyn qaarkood. facebook com / flyfishingsevilla
Jawaab Horacio Paez
Liz: iyada oo aan la xaqiraynin jawaabihi hore waxaa jiri kara sababo dhowr ah, ma aqaan inta sano ee kalluunkaagu jiro laakiin haddii ay ka yaryihiin 3 sano jir waxaa jira wax aad muhiim u ah in la tixgeliyo maadaama ay caadi tahay, labadaba kiis kaarib caadi ah ama koi Sida kalluunka dahabiga ah ku dhowaad dhammaan noocyadiisa kala duwan laga bilaabo dhalashada illaa qiyaastii. 3 sano jir, isbeddelka midabbada joogtada ahi waa iska caadi, marar badan ayaan doortay kalluun yaryar markii dambe 3-dii sano ee nolosheeda, iyo kiiskeyga shaqsiyadeed aqlabiyad badan waxay u muuqdeen inay qaataan midabyo guduudan ama gebi ahaanba liin dhanaan ah
3 tusaalooyin, mid huruud ah oo leh aketas iyo dhabarka madow, wuxuu kudhamaa gebi ahaanba oranji, oranji leh baalal madow maanta waa gebi ahaanba oranji, oranjo leh khad madow oo kuyaala jirka dhexda, maanta waa ficil ahaan dhamaantiis waa madow marka laga reebo xoogaa liinta xoog leh in ay ilaalinayso madaxa, 3du waa carassius ama (kalluun dahab ah) oo noocyo badan oo caan ah oo aan ugu jeclahay
SALAAMO WAXAAN HAYAA 1M D DHEER X 0.40 CN D SARE IYO 030 D QALBIGA KALUUMAYSIGA
WAAN SOO GELIN KARAA KALUUNTA DARKA AH EE DERIS BAA I SIiya HORTA HOOS AYAA KU YIMAADAN QOOL BUUXA OO AY CUNEEN CUNADA
Waad salaaman tihiin, waxaan kaliya sameeyay balli dhan 2000 litir qiyaastii waxaanan soo iibsaday 6 kalluun carp ah laakiin usbuuc aan haysto iyaga aad bey u guureen, waxaan iyaga ku quudin jiray maalintii hal mar raashin koy ah. Ma wax iska caadi ah bay iyagu u deggan yihiin? sida xaqiiqda dheeriga ah magaaladeyda Santiago de Chile waxaa jira 14 digrii maalintii iyo ilaa 7 digrii habeenkii, waxaan ku jirnaa deyrta.
Waxaan ka imid magaalada bahia blanc koonfurta pvcia ee bs as, argentina ... su'aashaydu waxay ku saabsan tahay quudinta carp xilliga qaboobaha, waan ogahay in wadamada sida Spain ay uga kalluumaystaan ​​qabow daran, halkan ayaan isku dayay oo Ma awoodin inaan wax uun helo ... su'aashaydu waxay tahay haddii ay jiraan fursado aan awoodno inaan kalluumeysto ama macquul maahan, aad ayaad ugu mahadsan tihiin mar hore
Waad salaaman tahay, waxaan hayaa kalluun sida kan huruudka ah oo ay yiraahdaan waa koi dahab ah waxaanan doonayaa inaan ogaado haddii uu wax badan korayo
Ku jawaab ana lilia
Immisa hiddo sidee ayuu karboos ku leeyahay koromosoomka 1?
Ku jawaab dolly
Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii ay haystaan ​​kalluun carpiga ah oo reer Chile ah oo iib ah, kan ka jira biyo xireenka Chile
Maxaa dhici kara haddii aan dhigo barkadda dabaasha ee aan la isticmaalin, waxay leedahay biyo fadhiisanaya muddo 4 sano ah, waxaan isku dayay PH, wayna qumman tahay, waxay igu yiraahdeen hawo dhige, maxaa yeelay malaha miiraa, barkadda ayaa leh qiyaastii 5000 litir, waa in ka yar kala bar POOL.
Jawaab RAUL RAMOS
Subax wanaagsan, waxaan hayaa balli leh carp badan, waxaan ubaahanahay inaan dayactir ku sameeyo balliga sidaa darteed waa inaan ka saaraa, waxaan jeclaan lahaa talooyinka noocee ah haanta kaydka ee aan helo intaan fulinayo dayactirka balliga intee in leeg ayey tahay waqtiga ugu badan ee lagu taliyay.
David bravo niyada dijo
Waad salaaman tihiin, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii kalluunkeyga koi uu waxyeello u geysto noocyada kale ee kalluunka maxaa yeelay waa mid kale oo ka mid ah kalluunka aan libaaxa ka muuqdo wuu dhimanayaa mana garanayo sababta. Mahadsanid.
Jawaab David Bravo Morales
Waad salaaman tihiin, kalluunka carp wuxuu u baahan yahay oksijiin
Waad salaaman tihiin, kaluunka carp wuxuu ubaahanyahay oksijiin, kaluunkeygu aad buu u dabaashaa dushiisana waxaan rabaa inaan ogaado hadii ay u baahan tahay si ay u caawin karto